Warbixinta Shirkii Horumarinta Waxbarashada Qoraxey Ee San Diego – Rasaasa News
Shirkii Horumarinta Waxbarashadda Qorraxey [HWQ] ee ka dhacay magaalada San Diego, gobolka California, USA July 26, 2009 oo guul iyo is af garad ku dhamaaday
Maalinimadii Axadii oo ay bisha Luuliyo ahayd 26 dii, 2009 waxaa magaalada San Diego ee dalka Maraykanka lagu qabtay shir looga warbixinayey xaalada waxbarashada Qorraxey ay haatan ku sugan tahay. Shirkaas waxaa guddoominayey Axmed Cabdi Haybe oo ka mid ahaa aasaaseyaasha Mashruuca Horumarinta Waxbarshadda ee Qorraxey.
Mudane Haybe wuxuu makarafoonka ku soo dhaweeyey Cali Axmed Xirsi (Cali xareed) oo aayado quraan ah iyo wacdi shirka ku furey. Kedibna Axmed Haybe ayaa dadweynihii halkaas isagu yimid oo ay tiradoodu ahayd lixdameeyo gaadheysay uga ayaa uga mahadceliey ka soo weyb galkooda shirkan. Wuxuu kale oo dadweynihii xusuusiyey goobta shirkan lagu qabtay inay tahay goobtii lagaga dhawaaqey aasaaska mashruucan bishii Juunyo 20 keedii, 2004, oo hada laga soo wareegay muddo shan sanno ah .
Mudane Haybe wuxuu si kooban uga hadley guulihii uu mashruucanu gaadhay ilaa intii la asaasay oo ay u badneyd qalabeyntii shanta dugsi ee magaalada Qabridahare ku yaala; 1 dugsi oo sare oo ilaa fasalka 12aad ah iyo 1 dugsi oo dhexe iyo 3 dugsi oo hoose iyo tayeyntii waxbarshadda. Mudane Haybe waxaa uu carrabka ku dhuftay in sannadkii hore ay sagaashan iyo toddoba (97) ka mid ah ardeyda Qabridahare ay jaamacado helaan, halka 37 ka mid ah ay xaq u yeesheen inay galaan kulliyadaha caafimaadka iyo injineerinka. Wuxuuna dadweynihii ku booriyey inay dadaalkooda iyo teegrada ay QEF u fidiyaan kobtaas ka sii wadaan.
Mudane Haybe wuxuu makarafoonka ku soo dhaweeyey Injineer Cabdullaahi Ibraahim Caydiid (Bucul) oo ah Guddoomiyaha Qorrahey Eduction Foundation (QEF). Injineer Bucul wuxuu dadweynihii halkaas isagu yimid u daaray laba cajaldadood oo maqal iyo muuqaalba ah, halkaas uu kolba intuu dhexgal ku sameeyo hadba sharaxaad raacinayey.
Cajaladahaas maqalka iyo muuqaalkaba ah oo shanta dugsi ee magaalada iyo xafiiska QEF ee jigjigga ka soo duubeen hawl wadeenada goobahaas ku sugan ayaa warbixin buuxda ka bixinayey dugsi kasta tirada ardeyda iyo shaqaalaha ku sugan iyo baahida hada ka jirta nooca ay tahay. Injineer Bucul wuxu si waafi ah oo faahfaahsan uga jawaab bixiyey wixii su’aalo ah ee ay dadweynuhu soo jeediyeen.
Kedibna waxaa makarafoonka lagu soo dhaweeyey Abwaan Maxamed Hiirad oo ka mid ahaa marti sharafta lagu martiqaadey inuu bal shirkan hadal ka yidhaahdo. Abwaan Maxamed Hiirad oo suugaanley ah waxaa uu goobtii ka mariyey geeraar uu mashruucan ugu ducaneyo, guulihiii uu soo hoyeyna ugu hambalyeynayo. Wuxuuna dadweynihii halkaas isagu yimid ku adkeeyey inaysan hawshaas taariikhiga ah ka daalin, si wanaagsan uga sii midho dhaliyaan. Geeraarkii uu Abwaan Hiirad tiriyeyna warbixintan xageeda dambe ayaad ka akhrisan kartaan.
Guddoomiyaha QEF Injineer Bucul oo hadalkii hadana qaatey wuxuu ka codsadey in xubno cusub oo reer San Diego ah loo baahan yahay, si geedi-socodka mashruuca ay u dardar geliyaan. Goobtaas dadkii isagu yimid lix xubnood oo ka mid ahaa ayaa gacmaha taagey, oo sheegay inay diyaar u yihiin inay hawshan ka qeyb qaataan. Shirkaas oo waxyaabihii laga wada hadlay qoraalkan kuma aanaan soo koobin, wuxuuna ku dhammaadey si GUUL ah.
Geeraarkii Abwaan Maxamed Hiirad: Dugsiga Sare ee Qorraxay Iyo Axmed Dawlo
Allahayow kuwa diintiyo khayrka noo dalbanaaya, Derejo weyn u hibeeyoo Dembigoodana dhaaf
Kuwa aan cid dilaynine Nabadda noogu dadaala Derejo weyn u hibeeyoo Dembigoodana dhaaf
Allahayow kuwa deeqda Dadkoodii u huraaya Derejo weyn u hibeeyoo Dembigoodana dhaaf
Ducadaas dabadeeda, Dulucdii hadalkayga Anigoon marna daahin Bal aan diirka ka qaado
Da,a roontii kacday waagi U dareeraay tacliinta Dawlad ay dhaliyaan iyo Daryeel ay fidiyaan iyo Lagama waayo dugsiin
Taas waxaa u daliila Axmed Dawlo damiirkiyo Dubkii way damqadeen dharaartii dad u sheegay Dooxadii Qorraxay iyo Dagmaaladii Daharaad Dugsigeeda sareeto Duruuftii Ubadkeeniyo Dayacay ku jiraan Dhagxantii dixda tiil iyo Doggobo aan debcahayn iyo Daasadaa u dhex yaalloo Duruusta ay ku dhigtaan
Doodii uu ku dhawaaqiyo Dadaalkii uu ku dhaqaaqay dadkii waay ku duxeenoo Durba waa aqbaleenoo Illayn duul badan weeyee Dhakhsaa maal la diyaarshay
Kuraas hoos u dacsaysiyo Qalab aan dadba haysan Lagu daabul marakaab Degdegsiinyo u gaadhe Doollar aan go’ahayna Macallimiintii ka durduurte Ardadiina dadaaloo mid damiina la waayoo jaamacaadii u dareere
Dagtoorkaa ina diirshiyo bulshadii danta raacdiyo qaar kaloo ku daydaaba dooradaa la cayaaray Sandiyeegaa u darayde Daawadeeda lahayde Daayinkaan baryayaaye Duunyo uu barakeeyiyo derejo wayn idin siiyoo dambigiinana dhaafyey